Sunday May 17, 2015 - 12:12:46 in Xiriirka Tiyakwonduuga by Nocsom Editor
Waxaa maalintii Isniinta si rasmi ah uga furmay magaalada Chelyabinsk ee dalka Russia shirkii 26-aad ee Xiriirka Taekwondow-ga Aduunka 2015-ka, shirkaan oo shir muhiim ah ayaa sanadkasta la qabtaa waxaana looga hadla horumarinta ciyaaraha Taekwondo
Waxaa maalintii Isniinta si rasmi ah uga furmay magaalada Chelyabinsk ee dalka Russia shirkii 26-aad ee Xiriirka Taekwondow-ga Aduunka 2015-ka, shirkaan oo shir muhiim ah ayaa sanadkasta la qabtaa waxaana looga hadla horumarinta ciyaaraha Taekwondo-ga Aduunka iyo in sidoo kmale waxaa lagu soo bandhigaa waxqabadka xiriirada Taekwondow-ga wadamada caalamka.
Shirkan waxaa sidoo kale looga hadlay ciyaaraha Taekwondow-ga Aduunka Rio 2016 oo lagu qaban doono wadanka Barazil iyo ansixinta sharciyada cusub oo kusoo kordhay cayaaraha Taekwondo-ga Aduunka.
Waxaa shirkaan muhiimka ah dalka Soomaaliya uga qeyb galay Gudoomiye kuxigeenka ahna madaxa xiriirada caalamiga ee Xiriirka Soomaaliyeed ee Taekwondow-ga Eng. Ahmed Ciise Kirish
Waxuuna bahda saxaafadda u sheegay in shirkaan uu xiriirkiisa aad uga faaideystayw wadahadalo gooni gooni ah la yeeshay madaxda Xiriirka Taekwondo-ga Aduunka iyo weliba madaxa Xiriirka Taekwondo-ga qaarada Afrika iyo wadamo badan oo gacan ka geysan kara horumarinta Xiriirka Taekwondo-ga Soomaaliyeed.
Sikastabo ha ahaatee, Waxaa Gudoomiye Eng. Kirish uu intaas raaciyey in ay Soomaaliya ay haatan ku Jirto kaalin muhiim ah ayna ka hormarsan tahay wadamo aad uwaaweyn marka loo eego wadanka Soomaaliya. Waxaana amaantaas leh gaar ahaan ciyaartooyda Taekwondowga qaranka Soomaaliyeed iyo weliba Guud ahaan Gudiga Olombikada Soomaaliyeed (GOS) oo taageero aad iyo aad ah siiyey horumarinta Xiriirka Taekwondo-ga Soomaaliyeed.
Ugu danbeyntii Waxaa shirkaas lagu aqoonsaday wadamo ilaa iyo 5 wadan gaaraya oo kusoo biiray Xiriirka Taekwondow-ga Aduunka oo la ansixiyey inay kamid noqon karaan laga bilaabo bisha June 2015 Sidoo kale Waxaa lagu balamay in shirkaan shirka xiga lagu qaban doono wadanka Mexico bisha May 2016 .
Ciyaartoyda Xulka qaranka Takewanduga Soomaaliya ayaa ku sugan Magaalada Chelyabinsk ee shirka ka dacayo halkas o ay uga qayb gali doonaan ciyaaraha takewanduga Aduunka 2015 iyadoo rajada Soomaaliya ay tahay mid sare.
W/D/ Xuseen Maxamed Hadaafow